Giotto Coin စျေး - အွန်လိုင်း GOT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Giotto Coin (GOT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Giotto Coin (GOT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Giotto Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $331 309.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Giotto Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Giotto Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Giotto CoinGOT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0605Giotto CoinGOT သို့ ယူရိုEUR€0.0516Giotto CoinGOT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0464Giotto CoinGOT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0555Giotto CoinGOT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.546Giotto CoinGOT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.384Giotto CoinGOT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.35Giotto CoinGOT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.227Giotto CoinGOT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0806Giotto CoinGOT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0847Giotto CoinGOT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.36Giotto CoinGOT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.469Giotto CoinGOT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.326Giotto CoinGOT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.52Giotto CoinGOT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.10.2Giotto CoinGOT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0832Giotto CoinGOT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0922Giotto CoinGOT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.89Giotto CoinGOT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.42Giotto CoinGOT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.45Giotto CoinGOT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩71.79Giotto CoinGOT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦23.28Giotto CoinGOT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.42Giotto CoinGOT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.67
Giotto CoinGOT သို့ BitcoinBTC0.000005 Giotto CoinGOT သို့ EthereumETH0.00016 Giotto CoinGOT သို့ LitecoinLTC0.00112 Giotto CoinGOT သို့ DigitalCashDASH0.000692 Giotto CoinGOT သို့ MoneroXMR0.0007 Giotto CoinGOT သို့ NxtNXT4.79 Giotto CoinGOT သို့ Ethereum ClassicETC0.00895 Giotto CoinGOT သို့ DogecoinDOGE18.27 Giotto CoinGOT သို့ ZCashZEC0.000762 Giotto CoinGOT သို့ BitsharesBTS2.31 Giotto CoinGOT သို့ DigiByteDGB1.98 Giotto CoinGOT သို့ RippleXRP0.215 Giotto CoinGOT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00212 Giotto CoinGOT သို့ PeerCoinPPC0.204 Giotto CoinGOT သို့ CraigsCoinCRAIG28.01 Giotto CoinGOT သို့ BitstakeXBS2.62 Giotto CoinGOT သို့ PayCoinXPY1.07 Giotto CoinGOT သို့ ProsperCoinPRC7.71 Giotto CoinGOT သို့ YbCoinYBC0.00003 Giotto CoinGOT သို့ DarkKushDANK19.71 Giotto CoinGOT သို့ GiveCoinGIVE133.05 Giotto CoinGOT သို့ KoboCoinKOBO14 Giotto CoinGOT သို့ DarkTokenDT0.0558 Giotto CoinGOT သို့ CETUS CoinCETI177.39